PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Abadlali kumele bakuqaphele abakusho esidlangalaleni
Abadlali kumele bakuqaphele abakusho esidlangalaleni
Isolezwe - 2017-10-13 - EZEMIDLALO -
EZINYE izinto ziyaphoxa nje uma uzizwa ziphuma emilonyeni yabantu osuke ungalindele ukuthi zingashiwo yibona. Uyakwazi ukukhexa umlomo, uhluleke nawukucabanga ngoba esebhimbe ngenothi eliphezulu lo osuke ethi uyakhuluma?
Ngike ngazithola ngikuleso simo kaningi phambilini, kodwa kuleli sonto ukukhexa kwami umlomo kube sezingeni eliphezulu wena owabona ukushisa kwelanga phakathi nehlobo le e-Upington, eNorthern Cape. Phela kule ndawo uMkhushulwa uke asitshele umhlolo, wokuthi amazinga okushisa ake afinyelele ku-40.
Ngivele ngibone ukuthi kungasa sengikwelamathongo ngobusuku obubodwa nje uma ngingavakashela khona.
Ake ngiyeke uMkhushulwa nesibikezelo sakhe sezulu ngihlale endabeni engifuna ukukhuluma ngayo kule ngosi yezemidlalo. Ngokwazi kwami abadlali bebhola, ikhilikithi, elombhoxo neminye imidlalo, ‘baxabana’ kuphela uma besenkundleni befuna ukuwinisa amaqembu abo.
Uma sekuphele umdlalo lowo osuke ubenze ‘izitha’ okwesikhashana bayaxhawulana, bangane, bahambe bayoshaya okokwehlisa ndawonye beshaya amancoko aphezulu.
Ngake ngafika ezinye izinsizwa zixabana le ngakithi eNdibhegi (Underberg), zibanga iKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Ngazitshela ukuthi zizophenduka iziphungumangatha zoqobo kulabo ababukayo ngoba abadlali bebhola benza izinto eziningi ndawonye uma bengasekho enkundleni. Ngangingasengi ezimithiyo ngoba sekukaningi sibona abadlali bebhola abagijima emaqenjini ehlukene emhlabeni bezijabulele ndawonye uma bengekho enkundleni. Kuyasho ukuthi sengizofinyelela kule minyaka lapho nokuguga sekuvele kukuzume nje ungazelele, yikho nje sengithemeleza wena owabona ibhasi langakithi lakudala elalihamba undendende uma liya edolobheni.
Cha empeleni ngithuswe ngunozinti weZimnyama, uJackson Mabokgwane, ngesikhathi ekhuluma komunye wemisakazo kuleli sonto. Bengingalindele ngempela ukuthi lo mdlali oseke ayibambe nakwiBafana Bafana angase ezwakalise ukuba namagqubu kanje ngento osekuphele izinyanga eziningi kangaka yenzeka.
Ngiyabona ukuthi kwamphatha kabi impela lo mbhemu ukudliwa yigoli lika-Oscarine Masuluke weBaroka FC sekusele amanenjana ukuthi umdlalo uyophela. Ngiyaqonda futhi ukuthi kungenzeka kwamcasula kakhulu ukuthi leli goli lashaywa omunye unozinti (uMasuluke) kanti kwakusho ukulahla amaphuzu kwiBucs njengoba umdlalo wagcina uphele ngo 1-1. Lihle lona leli goli likaMasuluke futhi ngangilindele ukuthi kube yilona elidla umhlanganiso emcimbini wePSL wokuklomelisa abadlali, nokho kwangenzeka. Angikhoke lapho nokho.
Kodwa njengoba igoli selisethubeni lokuphakamisela phezulu ifulegi laseNingizimu Afrika njengoba likwamathathu okuzoqokwa kuwona emiklomelweni yeFifa, kufanele nakanjani sijabule sonke siyisizwe.
Yini ngempela ebeyenza uMabokgwane athi ngeke alivotele leli goli ngoba yena ungumdlali akayena umlandeli webhola? Ngabe lo mdlali uchaza ukuthi unenhliziyo elukhuni ngendlela yokuthi ngeke ajabule uma ngoOkthoba 23 uMasuluke edla umhlanganiso eLondon? Angikholwa ukuthi bekumele aphendule ngendlela aphendule ngayo lo nozinti ebuzwa ngalokhu.
Abadlali bebhola yibona okumele bakugweme ukungezwani esidlangalaleni ukuze abalandeli bakuqonde ukuthi unobhutshuzwayo wumdlalo nje, kusuke kungaliwa. Uma kungabadlali bebhola abakhombisa ukungesekani basuke belindele ukuthi benzenjani abalandeli?
Kuyimanje sibhekene nenkinga yokuthi abalandeli bebhola kabafuni ukwamukela imiphumela ikakhulukazi uma ingahambisani nabo. Bayajikijela, bathuke, basho ukubadla babafele abaqeqeshi babo.
Kukho konke lokhu kumele kube ngabadlali abangenelelayo babatshele ukuthi ibhola yinto yokuzithokozisa nokuthi kungenzeka noma yini emdlalweni ngakho kumele samukele noma yimuphi umphumela.
Indlela akhulume ngayo uMabokgwane ichaza ukuthi ngelinye ilanga ngeke ambheke nakumbheka uMasuluke uma kwenzeka bebizwa kwiBafana bobabili. Yinto okungamele ikhuthazwe nakancane leyo ngoba ekugcineni kumele sibambane njengesizwe.
Sengiphetha nje, ngizothi kuMabokgwane kumele akuqaphele akukhipha ngomlomo wakhe ngoba kungase kumenze abukeke njengomuntu onenhliziyo embi kanti akunjalo.
Ngiyethemba ukuthi bonke abalandeli bebhola baseNingizimu Afrika bazovota ngobuningi babo ukuze baqinisekise ukuthi uMasuluke ubuya nawo umklomelo eLondon.
Uma lokho kugcina kwenzekile ngeke kujabule iNingizimu Afrika kuphela kodwa ne-Afrika yonke iyochichima injabulo.